पहिलो पटक सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ ? यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् « हाम्रो ईकोनोमी
पहिलो पटक सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ ? यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्
जीवनचक्र चलाउने माध्यमसँगै प्रेम अभिव्यक्त गर्ने उत्तम उपहार पनि हो, यौन । तर यौन शिक्षाको अभावमा कतिपयको पहिलो प्रयास पीडादायी बन्न पुग्छ । ज्ञानको अभावमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै रुपमा पीडादायी हुन सक्छ । तनाव हुनसक्छ । पुरुषमा शीघ्रपतन, लिंग योनिभन्दा बाहिरै रहने हुनसक्छ । जथाभावी यौन सम्पर्क गर्दा महिलाको योनी दुख्ने, घाउ लाग्ने पनि हुनसक्छ । पहिलो रंगीन सम्बन्ध क्लाइमेक्समा नपुग्ने समस्या पनि हुनसक्छ । पहिलो यौन सम्बन्ध आनन्दमयी नभई पीडादायी हुँदा त्यसको नकारात्मक असर पछिसम्म पर्नसक्छ ।
स्नतको मुन्टो संवेदनशील र नरम हुन्छ । स्तन बिस्तारै खेलाउँदा आनन्द आउँछ । स्तनको मुन्टो ९निप्पल० बेस्सरी समात्दा रमाइलो हैन, पीडा हुन्छ र घाउसमेत हुनसक्छ । महिलाको योनि झिल्ली नफुटेको र पुरुषको लिंगको छाला सुर्किएको छैन भने त्यस्ता यौन जोडीलाई नेपाली चलनचल्तीअनुसार कुमारी तथा कुमार भएको मानिन्छ । झिल्ली च्यातिएको या लिङ्गको छाला तल सरेको छ भन्दैमा उसले पहिल्यै सेक्स गरिसकेको छ भन्ने हुँदैन । यो कुमार या कुमारित्व परीक्षणको वैज्ञानिक माध्यम पनि हैन ।
युवतीले साइकल तथा मोटरसाइकल चढ्ने, उफ्रिने, घोडा चढ्ने, रुख चढ्ने लगायतका गतिविधिले यौन सम्पर्क गर्नुपूर्व नै योनि झिल्ली फुटिसकेको हुनसक्छ । पुरुषले हस्त मैथुन गर्दा वा त्यत्तिकै चलाउँदा पनि लिंगको छाला सुर्किएको हुनसक्छ । च्यात्तिएको छैन भने पहिलो दिनको यौन सम्पर्कमा योनीभित्र लिंग पस्नलाई योनि झिल्ली फुट्नु पर्छ । योनी झिल्ली फ्टदा महिलालाई अत्यधिक दुख्छ । यसक्रममा महिलालाई अत्यधिक रक्तश्राव हुने सम्भावना पनि हुन्छ । पुरुषको लिंगको भित्री छाला सुर्किएर लिंगको डाँठतिर सर्दा पुरुषलाई पनि असाध्य दुख्छ ।
यौन सम्पर्क गर्दा टाइट कपडा नलाउँदा राम्रो हुन्छ र सामान्यतः नांगै भएको राम्रो । यौन जोडीबीच यौनाङ्ग देखिँदा एक आपसमा उत्तेजना उत्पन्न हुन्छ, जस कारण यौनानन्द बढ्छ । एकले अर्कोको कपडा खोलिदिँदा राम्रो हुन्छ । एकले अर्कोको कपडा खोल्दा नजिकपना ल्याउँछ । कपडा खोल्दा जिस्किँदै खोल्नुपर्छ ।
पहिलो पटक यौन सम्पर्क गरिसकेपछि अनुहार रातो–पीरो हुन्छ । लिपिस्टकका डाम चुम्बनका ¥याल अनुहारमा हुन सक्छ । योनिमा झरेको वीर्य चिप्लो र टाँसिने प्रकृतिको हुनाले महिलाको दुवैतर्फको तिघ्रामा बग्न थाल्छ । योनिबाट वीर्य बाहिर निस्कन्छ । त्यसैले यौन सम्पर्क गरिसकेपछि यौनाङ्ग सफा गर्नुपर्छ । मुख धुनु पर्छ नभए राम्रोसँग पुछ्नु पर्छ ।
कमला जस्तै दोहोरीमा माहिर दिपेन थापाले कृष्णा बजगाइलाई आच्छु आच्छु पारे ।
तपाईको सिरानीमुनी के छ ? बास्तुशास्त्र भन्छ, यी कुरा राखेर सुत्दा फलिफाप
तपाईको सिरानीमुनी के छ ? धेरैले भन्छन्, २/ ४ पैसा । अनि
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि श्वेताले भनिन्ः मेरो जाँगर थपियो
अभिनेत्री श्वेता खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर आफ्नो पहलमा निर्माणधिन
बुढा बिदेशमा दुख गर्ने , बुढी चै भुपु मायालु सङ कोठामा (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
नेपालि समाजमा भई रहेका बास्तबिक घटनालाई जस्ताको तस्तै यस भिडियोमा उतारिएको